Umkhuleko wokucela umsebenzi Discover ➡️ Discover Online ▷ ➡️
Umkhuleko wokucela umsebenzi
Kithina sonke, ngesikhathi esithile ezimpilweni zethu, kufika isikhathi esinzima ngokwezezimali. Abanye bagcina imisebenzi yabo, yize lokho abakuholayo kungaseneli; abanye balahlekelwa imisebenzi futhi badliwe ingcindezi nokuphelelwa yithemba ngenxa yezikweletu ezisilele. Uma ubhekene nesimo esibi futhi udinga umsebenzi, themba uNkulunkulu inkosi yethu futhi wenze umkhuleko wokucela umsebenzi njengoba sikukhombisa lapha.
1 Umkhuleko wokucela umsebenzi, themba uNkulunkulu
3 Ukuthandaza kanjani?
Umkhuleko wokucela umsebenzi, themba uNkulunkulu
Uma unezinkinga empilweni yakho, akukho okungcono ukwethembela kuNkulunkulu, umdali wethu. Phela akaze azilahle izingane zakhe. Uma ungawutholi lowo msebenzi ukunikeza lokho obathandayo abakudingayo noma okudingayo, ke thandaza ngokholo. Lapha sikushiya umusho olandelayo:
“Baba waseZulwini othandekayo, egameni likaJesu, ngifuna ubuhlakani bakho futhi ngiyakwethemba ukuthi uzongihola ekutholeni umsebenzi ongifanele kakhulu. Kusukela manje kuqhubeke ngifuna ukuhamba ngaphansi komusa neqiniso lakho futhi, ngaphandle kokukhothamela izifiso zami nokuqonda okungaphezulu.
Ngisize ngithole umsebenzi omuhle lapho, ngezandla zami, kungasweleki lutho kimi noma olwami uqobo. Ngeke ngikhathazeke noma ngibe nokukhathazeka nganoma yini, Baba, ngoba ngizwa ukuthi ukuthula kwakho kuza enhliziyweni yami nasemqondweni wami.
Ungumthombo wami wamanzi aphilayo, ngiyakwethemba ukuhlinzekwa kwakho nokuthi uyanginika amandla ukumelana nokwehla nokwenyuka kwempilo yami usuku nosuku. Ngiyabonga, Baba, ngokunginikeza isidingo sami somsebenzi ngokwengcebo yakho kanye nenkazimulo yeNkosi yethu.
O Nkulunkulu wami, kwangathi amandla akho angahamba nami namuhla ukuthola umsebenzi. Ngiholele kulowo msebenzi engizowuthanda futhi ngiwazise ngomphefumulo wami wonke. Ngiqondise endaweni enendawo yenhlonipho nokubambisana, endaweni ephephile nejabulisayo. Ngisize ngithole leyo bhalansi engokwengqondo nengokomoya kulowo msebenzi omusha ongigcinele wona.
Ngiyabonga, Nkosi ngokungilalela nokungisiza namhlanje. Impilo ayihlali ilula ngaso sonke isikhathi, kodwa ngizozama ukukhumbula ukuthi uhlala ukhona ukungisiza kuwo wonke umzuzu wokuphila kwami. Ubusisiwe wena, Nkosi, Malibongwe iGama lakho eliNgcwele.
Ubunzima ezimpilweni zethu kwesinye isikhathi busenza sizizwe sehluliwe. Ngenxa yalokhu, kwesinye isikhathi sicabanga ukuthi uNkulunkulu akasisizi, ukuthi lokho esibhekana nakho akulungile. Sikholwa ukuthi, njengoba sigwema kakhulu ukulimaza labo abasizungezile, silungile futhi asifanele lokho okwenzeka kithina. Lokhu kungaba yiqiniso, kepha uNkulunkulu akalokothi asishiye.
UNkulunkulu akazikhohlwa izingane zakhe, lezo azidala ngomfanekiso wakhe nangokufana naye. Kodwa-ke, okuphambene nalokho kuyiqiniso: indalo yakhe iyamkhohlwa, imbulale. Lapho sibhekene nezikhathi ezimbi, kufanele sikhumbule ukuthi uNkulunkulu uzohlala enathi ngaso sonke isikhathi. Yize abanye begcizelela, akuyena osibeka ezimweni ezingemnandi, kunalokho kuyintando yakhe ukukugwema.
Ngenxa yalokhu okungenhla, kubalulekile ukuthi singazihlukanisi noNkulunkulu. Ubunzima bungathinta ukuzinikela kwethu, ukukholwa kwethu, kepha akumele sikuvumele lokho kufinyelele ezingeni eliphakeme. Ukuqhubeka nokuxhumana noNkulunkulu ukugcina umoya wethu umsulwa, kungenxa yokuthi sithembela esibusisweni nasivikelweni sakhe.
Lapha umthandazo uba obalulekile, ngoba kuyinto eyalelwe ukuthi yenziwe, yindodana yakhe uqobo, uJesu. Ukungathandazi kufana nokutshela uNkulunkulu ukuthi asikudingi. Singathola ingcebo ngaphandle kukaNkulunkulu, singaba namandla, singaphumelela, noma yini ngaphandle kwakhe. Kepha masingakhohlwa ukuthi asinaso isibusiso sakhe, noma isivikelo sakhe, sizobe sinobugovu.
Uma unebhizinisi futhi ufuna ukukhulekela ukukhula kwalo kanye nekusasa lezomnotho, ungahle ube nentshisekelo yokufunda ifayili le- umthandazo kuMathewu Ongcwele.
UJesu, abaphostoli, abahubi, abaprofethi, bonke bayala ukuba kuthandazwe. Umkhuleko ufana negazi lomoya wethu. Siyazibuza ukuthi kungani el mundo Ishintshe kakhulu, kabi, kungani kunokukhathazeka okungaka, ukukhathazeka okukhulu, ukucindezeleka futhi ngenxa yalokhu, izifo. Abaningi bangamaKhatholika, amaKrestu nabanye, kepha baningi labo abashiya uNkulunkulu bodwa. Lowo okhulekayo akoni; kepha owonayo akathandazi. Ikhambi lokukhathazeka kanye nengcindezi ukuthembela kuNkulunkulu, thandazela ukugcina ukuxhumana naye.
Ukuthandazela, hhayi nje ukuthola umsebenzi kepha kwanoma yini, into yokuqala ukukholwa. Yiba nokholo nezinhloso ezinhle. Asiceli ukuqongelela ingcebo eningi noma ukuthola lokho esikulangazelelayo, ngamunye wethu. Siyacela ukuthi sibe nakho esikudingayo, okwanele ukuthi sikwazi ukukhokha izikweletu zethu, sikwazi ukondla izihlobo zethu, ukuze sibe nempilo ehloniphekile nenesithunzi. Ngaphezu kwakho konke, makube ukufeza intando kaNkulunkulu, ngenhloso asinike yona.
Ukuze imithandazo isebenze, kubalulekile hhayi kuphela ukukwenza ngokusuka enhliziyweni, kepha futhi nokuphikelela. Njengoba uJesu asho emfanekisweni ngomngane ongamukeleki:
"Ake sithi omunye wenu enomngani bese ephendukela kuye phakathi kwamabili, athi:" Mngani, ngiboleke izinkwa ezintathu, ngoba omunye wabangane bami uvela ohambweni futhi anginalutho engingamnika lona ", futhi ngaphakathi uyaphendula: "Ungangihluphi; manje umnyango uvaliwe, mina nezingane zami sesilele. Angikwazi ukusukuma ngikunikeze. Ngiyakuqinisekisa ukuthi noma engavuki ukukunika ngoba engumngani wakho, uzovuka okungenani ngenxa yokuphikelela kwakho futhi uzokunika konke okudingayo. Nami ngiyakuqinisekisa: cela uzophiwa, funa uzothola, ungqongqoze uvulelwe. Ngoba ocelayo uyathola; Uma usesha uzothola; nakulowo obizayo, izovulelwa ». (Luka 11, 5, 10)
Ngendlela efanayo uJesu athi sicela ukwamukela, kufanele sithandaze ngokukholwa siphikelele usizo lukaNkulunkulu. Lokhu ngaphandle kokukhohlwa ukuthi, ngaphezu kwalokho, kufanele sibe nesimo esihle kakhulu futhi siphikelele ekufuneni esikudingayo.
Rosary kuya Virgin of Guadalupe
I-Rosary Engcwele ngoLwesihlanu
Ingcwele Rosary ngoLwesithathu
Umkhuleko wokuphakamisa umphefumulo womuntu oshonile
IZIMPILO ufunde UKUNCIPHA EMSIMBENI Yehlisa isisindo | UBUHLE IZIMPAWU IBhayibheli UKUPHILA KAHLE Kanjani UNkulunkulu Ezihlukahlukene Injongo Imisho Izinganekwane Izibalo Amaphupho ami Imikhuleko Popular Izinkolo Santos Akuhlukaniswe Amaphupho Amathebula Tarot Whatsapp